ज्योतिशास्त्र अनुसार बजरंग बाण पढेर के हुन्छ र सुकेको बेसार खाल्टोमा वा बाहिर फाल्दा के फाइदा हुन्छ? - नेपाली खोज
मूलतः उत्तर दिइएको थियो: के हुन्छ जब एक बजरंग तीर ज्योतिष मा खस्छ? र सुख्खा हल्दी खाडलमा फाल्नु वा बाहिर फाल्नुको फाइदा के हो?
माफी संग अनुरोध: कृपया पहिले हिन्दी भाषा को सम्बन्ध मा र खाली नीति अनुसार हिज्जे सही गर्नुहोस्। कृपया प्रश्न मा ज्योतिष बाट के अपेक्षित छ र तपाइँ के चाहानुहुन्छ व्याख्या गर्नुहोस्। जवाफ दिने प्रयास हुनेछ।
1- पहिलो प्रश्न हो: ज्योतिष अनुसार बजरंग बान पढेर के हुन्छ?
सर्वप्रथम, ज्योतिष को मूल ग्रंथहरुमा बजरंग बान को उपयोग को कुनै उल्लेख छैन। विगत केहि बर्षहरुमा लेखिएको ग्रह शान्ति को ज्योतिषीय ग्रंथहरुमा, गणेश, दुर्गा, हनुमान र कार्तिकेय को पूजा मंगल ग्रह को शान्ति को लागी सल्लाह दिइएको छ।
यो यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा हो कि कर्म को फल निश्चित रूप मा अनुभव गर्न को लागी छ। भगवानको आराधना गरेर, हामी उनीहरुलाई सहन र बाटो पाउने शक्ति पाउँछौं। तर टोन चाल संग केहि हुदैन।
यदि कसैलाई कुनै पाठ, मन्त्र जप आदि मा कुनै अनुभव छ, तब यो जरूरी छैन कि सबै को समान अनुभव हुनु पर्छ; यो प्रत्येक साधक, भगवान को अनुग्रह, उद्देश्य आदि को भक्ति को तीव्रता मा निर्भर गर्दछ।
★★ बीज मन्त्र र प्रार्थना को बीच एक फरक छ
बीज मन्त्रहरु यस्ता मन्त्र हुन् जसमा देवनागरी को अक्षर को विशेष संयोजन गरीएको छ जस्तै:
राम रामाय नमः।
ओम गण गणपते नमः
★ बीज मन्त्र एक तरीका मा विशेष शक्तिशाली मन्त्र हो, त्यसैले तिनीहरुको उच्चारण र उपयोग को विधि मात्र अनुष्ठान विशेषज्ञ पंडित जी बाट वा यो योग्य हुन जान्ने एक व्यक्ति बाट सबै कुरा सिकिसकेपछि गरिनु पर्छ।
केहि मानिसहरु को विश्वास छ कि एक विश्वास हुनु पर्छ, गलत उच्चारण माफ गरीएको छ, तर यो कुरा शास्त्र अनुसार तार्किक छैन।
केहि भन्न को बिन्दु मात्र प्रार्थना को लागी राम्रो छ। यदि भगवान को प्रार्थना कुनै पनी भाषा मा टूटेका शब्दहरुमा श्रद्धा भक्ति संग गरिन्छ, तब यो सुनेको छ। तर मन्त्र शब्द शक्ति को उपयोग हो, त्यसैले भक्ति को अलावा, उच्चारण को शुद्धता र उपयोग को नियमितता बिल्कुल जरूरी छ।
कोहि भन्न सक्छन् कि यो लाल किताब को उपयोग हो। जबकि तथ्य यो रहन्छ कि यो र यस्तै धेरै प्रयोगहरु अब ज्योतिष को लाल किताब किताब को नाम मा सामने आएको छ। लाल किताब ज्योतिष को एक फरक तरीका हो, यो मा पनि एक व्यक्ति को जन्म पत्रिका लाल किताब को नियम अनुसार तैयार गरीन्छ, तब ग्रहहरु को उपायहरु लाई बताईन्छ।
बाढीले निम्त्याएको बितण्डाबाट वडाध्यक्ष लक्ष्मण सुतेको कोठाबाट भागेर मुस्किलले ज्यान जोगाए